Bogga Ciyaaraha, 11 October 2017
Arbaco 11 October 2017
Goolkii Sababay in Mareykanka uu Haro oo Muran uu ka Jiro
Haddii FIFA ay qarashaad badan gelin laheyd tignoolajiyadda sheegta in kubaddu ay dhaaftay xariiqinta goosha, maanta Mareykanka waxay ka mid noqon laheyd dalalka ka qeyb galaya koobka adduunka ee sanadka 2018.
UEFA oo La-taliye u Magacowdey Figo
Ciyaar-yahankii hore ee Burtaqiiska Luis Figo, ayaa UEFA u magacowday in uu noqdo lataliyaha UEFA ee dhinaca kubadda cagta, sida ay hay'addaasi sheegtay Arbacadii.
Robben oo Ka Fariistay Ciyaaraha
Kabtanka xulka qaranka dalka Holland Arjen Robben ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah, kadib marki xalay uu xulkiisa ku guuldareystay inuu usoo baxo koobka aduunka.
Portugal iyo France oo Soo Gudbay
Xulalka kubadda cakta ee Portugal iyo France ayaa usoo gudbay ciyaaraha koobka aduunka ee sanadka 2018-ka lagu qaban doono dalka Russia.
Kooxo Soomaali ah oo Tartan ugu Soo Dhamaaday Virginia
Tartan ciyaareed oo kubadda cagta ah ayaa lagu soo gaba gabeeyay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Waxana tartankaani ka qeyb galay kooxo ka kala yimid Mareykanka iyo Kanada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinan ka diyaariyay.
Musharraxiinta Ballon d'Or oo La Shaaciyay
Majallada ka foolloota ciyaaraha kubadda ee France Football ayaa Isniinti ku dhawaaqday 30-ka laacib ee u dharraxan abaalmarinta sanad laha ah ee Ballon d’Or ee la siiyo xidiga ugu wanaagsan aduunka dhinaca kubadda cakta.
Argentine, Holland, Portugal oo Qarka u Saaran In Ay Haraan
Dhageyso Xubinta CIyaaraha, oo qodoobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin, dalal magac weyn ku leh koobka kubbadda cagta adduunka oo qarka u saaran inay sanadkan seegaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya,
Soomaaliya oo Guul Darro Xooggan kala Kulanta Ruushka
Xulka Kubad Caga-yaraha Soomaaliyeed ee ka qeyb galaya tartanka koobka kubbad caga-yaraha adduunka ee dalka Tunisia ka soconaya, ayaa guul darro xanuun badan kala kulmay dhiggooda Ruushka.
Nigeria oo Usoo Baxday Koobka Aduunka
Xulka qaranka Nigeria ayaa noqday dalki ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo usoo baxa koobka adduunka ee sanadka danbe lagu qaban doono dalka Russia, kadib marki ay 1-0 uga badiyeen xalay xulka Zambia.
Soomaaliya oo Ka Qeyb Galeysa Koob Caalami ah
Dalka Tunisia waxa si rasmi ah uga furmey tartanka kubbad caga yaraha adduunka, oo markii labaad taariikhda la qabanayo. Wax aka qeyb galaya 24 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Tartankii hore waxa lagu qabtay dalka Mareykanka waxana ku guuleystay isla Mareykanka